Full Gospel Bible Training Center
Pastor Mung Preaching Notes
Latest Update (Sunday Preaching)
Rev. Roi Ja on April 15, 2018 (M)
Rev. Khen Kip on April 08, 2018 (M)
Rev. Pau Zel Mang on April 01, 2018 (M)
Rev. Vung Za Niang on March 25, 2018 (M)
Rev. Dam Suan Mung (D.D) on March 18, 2018 (M)
Rev. Dam Suan Mung (D.D) on March 11, 2018 (M)
Full Gospel Assembly Church မှ ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင်လာရောက်ပါ၀င်ဖူးပါသလား။ မလာဖူးရင် တစ်ခေါက်လောက် လာရောက်ပါ၀င်ဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ အသင်းတော်မှာ ၀တ်ပြုချိန်ကို တနဂ်နွေနေ့မှာ ဘာသာ(3)မျိုးရှိပါတယ်။
နံနက် ၉နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ မြန်မာဘာသာဖြစ်ပြီး၊ ညနေပိုင်း ၁နာရီမှ ၃နာရီထိ ချင်းဘာသာဖြစ်ပါတယ်၊ ညနေခင်း ၅နာရီမှ ရနာရီခွဲမှာတော့ အဂ်လိပ်ဘာသာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
စနေနေ့ ညနေပိုင်း ၁နာရီမှ ၃နာရီထိ လူငယ်အစီစဉ်ရှိပါတယ်။ လူငယ်များဟာ စနေနေ့ ၀တ်ပြုချိန်မတိုင်ခင်မှာ မြို့တွင်းတွေမှာ ဧ၀ံဂေလိဟောြော၀ေငှဘို့ သွားကြပါတယ်။ သင်ဟာ လူငယ်တစ်ယောက်ဆိုလျှင် သင့်ရဲ့ နုပျိုတဲ့ အချိန်တွေကို ကျွန်တော်တို့ FGA Myanmar, Youth Department မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆ်ုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ လရဲ့ ပထမပတ် (၁)ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့ထိ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ပုံမှန်ရှိပါတယ်။ ဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိဘို့ အယောက်စီတိုင်းကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ထို့အပြင် အစာရှောင်ပြီးမှာတော့ ရန်ကုန်တစ်၀ှိုက် ဧ၀ံဂေလိသွားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဧ၀ံဂေလိအဖွဲ့ကိုတော့ Rev. Kyaw Kyaw က ဉီးဆောင်ပြီးသွားရမှာပါ။
ကမ္ဘာကြီးက နေ့စဉ်ကြားရတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဖြစ်ပျက်တာတွေကို ကြည့်ရင် နောက်ဆုံးသောကာလ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ယုံကြည်သူတွေ အချိန်ဖြုန်းမည့် အချိန် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တွေ၀ေနေမည့် အချိန်တွ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
မိတ်ဆွ... ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ခရစ်တောရဲ့ မဟာစေခိုင်းချက်အားပြည့်စုံစေဘို့ လာရောက်ပါ၀င်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မကြောက်နှင့်။ သင်၏ ဘုရားသခင် ငါသည် သင့်ကို ခိုင်ခံ့စေမည်။ သင့်ကို စောင်မမည်။ ငါ့သစ္စာ လက်ျာလက်ဖြင့်ထောက်ပံ့မည်။ (ဟေရှာယ ၄၁း၈-၁၆)
အသက်တာအောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက် မည်သူ့ဘက်မှာ ပါရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင် ဘိသိက်ခဲ့တဲ့ နေရာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးတတ်ဖို့အရေးကြီးသည်။ ရှောလုနဲ့ ဒါ၀ိဒ် အသက်တာကို ကြည့်ပါ။ ရှောလုသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင် ဘိသိက်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင် ၏စကား နားမထောင်သည့် တစ်နေ့၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘိသိက်ခြင်း သူ့ဆီမှာ မရှိတော့ပါ။ ထိုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်က နောင်တက်မယ့် ဘုရင်အဖြစ် ဒါ၀ိဒ် ကို ရွေးခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဒါ၀ိဒ်နဲ့ အတူပါရှိသည့်အတွက် ရှောလုက ရန်ဘက်ပြုလာပြီး ရှောလုအနေနဲ့ လက်ရှိနန်းထိုင်နေ တုန်းဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင် ဘုရင်မဟုတ်တော့ပါ။ တစ်နေ့တော့ ဂေါလျက်ဆိုတဲ့လူသည် ဣသရေလ တစ်တပ်လုံးကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ ရှောလုကိုယ်တိုင် တုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်ကို တပ်ထဲတွင် အလည်လာသော ဒါ၀ိဒ်က ကြား၍ မခံနိုင်ခဲ့ပါ။
"သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံ အရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့သွား၍ ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြား လော့။ ယုံကြည်၍ ဗတ္တိဇံကို ခံသောသူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်း သို့ရောက်လတ္တံ့။ မယုံကြည်သောသူကား အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ လတ္တံ့။ (မာကု ၁၆း၁၅-၁၆)
ခရစ်တော် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်မကြွခင် ယုံကြည်သူများ ကို ဘာမှားသွားသလဲဆိုတော့ ဧဝံဂေလိ တရားဟောပြောဖို့မှာသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ယေရှုခရစ်ရဲ့ မိန့်မူချက်ဖြစ်တယ်။ မေတ္တာရပ်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ဟောချင်တဲ့ အချိန်ဟောမယ်၊ အဆင်မပြေရင်မဟောနဲ့ ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတုန်းက သားအဖနှစ်ယောက် ဘူတာရုံ၊ ကားဂိတ် စတဲ့ နေရာတွေမှာ ဧဝံဂေလိဝေစာတွေကို သွားဝေကြတယ်။ ဒီလို ဝေသွားရင်း မိုးကအုံ့လာတယ်။ လေက တိုက်လာတယ်။ ဒီတော့ ဖခင်ကသားကို မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတော့ အိမ်မှာပဲ ကွေးလိုက်ကြရ အောင်လို့ ပြောတယ်။ သားငယ်က ဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့ ဒါဆို အဖေမိုးရွာတဲ့နေ့မှာ ယေရှုက လောကီသားများပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ ပျက်ပြယ်သွားလို့လားလို့ မေးလိုက်တယ်။
မေတ္တာမရှိလျှင် အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်၏ ... (၁ ကော ၁၃း၁-၈)
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ညွန်းလောင်းတော်မူ၏ ... (ရော ၅း၅-၁၁)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးလက်နက်ဟာ မေတ္တာဖြစ် တယ်။ အသက်တာမှာ အမှားကို ရှောင်ပြီး အမှန်နှင့်အသက်ရှင် ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးတယ်။ အမှားနှင့်အမှန်ကို ကောင်းမွန်စွာ ခွဲခြားတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ိညာဉ်တော်က ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ ဒီအရာတွေထက်ပိုအရေးကြီးတာက မေတ္တာနဲ့အသက်ရှင် ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြပါတယ်။
လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂ ကိုကြည့်ရင် သားအကြီးက ဖခင် အပေါ်သစ္စာရှိတယ်။ သားအငယ်ကတော့ မလိမ္မာဘူး။ သူ့ရဲ့ အမွေ ကို ယူပြီး ကာမဂုဏ်ထဲမှာ ဖြုန်းတီးပစ်တယ်။ ဒီသားမိုက်ပြန်လာ တော့ ဖခင်က အကောင်းဆုံးအရာတွေနှင့် ပွဲလုပ်ပေးတယ်။ ဒီတော့ သားအကြီးက မကျေနပ်ဘူး။ သူ့လို သစ္စာရှိတဲ့ သားကျတော့ ပွဲလုပ်ပေးဖို့ ဆိတ်ကလေးတစ်ကောင်တောင် မသတ်ပေးဖူးဘူးလို့ ပြောတယ်။ လောကအတွေးအခေါ်အတိုင်းကြည့်ရင် သားကြီးပြော တာ မှန်တယ်။ တစ်ချိန်လုံး ဖခင်အနားမှာ သစ္စရှိရှိ အလုပ်လုပ်နေ တဲ့ သူ့အဖို့တော့ တကယ်လည်း မကျေနပ်စရာပါဘဲ။
လူတို့သည် အားမလျော့ဘဲ ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းရမည် အကြောင်း ...။ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူသော သူတို့ သည် ညဉ့်နေ့မပြတ် အော်ဟစ်၍ တောင်းလျှောက်လျှင်၊ ဘုရား သခင်သည် သူတို့ဘက်၌ တရားမစီရင်ဘဲ နေတော်မူမည်လော ...။ ငါဆိုသည်ကား သူတို့ဘက်၌ အလျင်အမြန် တရားစီရင် တော်မူမည်။ (လုကာ ၁၈း၁-၈)
ဘုရားသခင်ဟာ ယုံကြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားပါလျက် ဆုတောင်းတဲ့အသံကို လစ်လျူမရှုဘဲ ဂရုစိုက် နားညောင်းအဖြေပေး တဲ့ ဘုရားသခင် ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမဆို နှလုံးသား မပါဘဲ ဆုတောင်းပါက အဖြေရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်က စိတ်နှလုံးအပြည့် သူ့ကို ကိုးစားတာ လိုချင်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ မုဆိုးမလို မလျော့သော ဇွဲနှင့် မရမချင်း ဆုတောင်းရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆုတောင်းပေမယ့် အဖြေက မရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆက်လက် ဆုတောင်းပါ။ဘုရားသခင်က အမှန် တကယ် ဆုတောင်းတဲ့သူကို ချန်မထားပါဘူး။ ဘုရားသခင်မှာ ယုံကြည်သူတွေအပေါ် ဆိုးညစ်တဲ့ အကြံအစည်မရှိပါဘူး။ အကောင်းဆုံးအကြံအစည်ပဲ ရှိပါတယ်။ နှောင့်နှေးသလို ခံစားရပေ မယ့် အကောင်းဆုံးရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။
Latest Update (Audio Sermon)
Rev. Dr. Dam Suan Mung
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ရိပ္သိမ္းရမည့္ႏွစ္ 10,024
ကျွနု်ပ်အသက်တာ လှပတင့်တယ် 532
ငါ့ကိုခေါ်သောအခါ ငါထူးမည် 526
9:00 AM to 1:00 PM (in main Service)
The very first album of Full Gospel Music, produced in 1996. This album consists (19) songs and these songs are translated from anointed English songs, Chin Songs. Readmore
This album is the secound album of Full Gospel Assembly in 1997. It's consists (21) song and our worship leader was Rev. Roija. All songs are translated from anointed english songs and chin songs.
Available tape only. Read more
Our 3rd Worship album. released in Feb 20, 1998. This album consist 20 songs and translated by English Songs and Chin Songs. Our worship leader was Rev. Khin San Maw. Available tape only. Readmore
The 4th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (19) worship songs in it.. Readmore
This album was the first "LIVE ALBUM" of Full Gospel Music, released in 2001. This album istaken from the ''Festival Of Praise" in Myanmar, held at Judson Memorial Hall, MBC. There are (19) inspiring songs. Readmore
The 5th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (19) worship songs in it.. Readmore
The 6th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (15) worship songs in it.. Readmore
The 7th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2000. There are (19) worship songs in it.. Readmore
The 8th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2001. There are (13) worship songs in it.. Readmore
The 9th praise and worship album of Full Gospel Music produced in 2005. There are (15) worship songs in it.. Readmore
FGA Tulsa, USA
If you haveaquestion about ourChurch, please feel free mail to our Junior Pastor Rev. Roija!
Every Sunday, we have3Worship Services;
Myanmar (Main) Service: 9:00 am to 1:00pm
Zomi Serice: 2:00 pm to 4:00 pm
English service: 5:00 pm to 7:30 pm
Developed by Khaingpwee | Copyright © 2015 Full Gospel Assembly-Myanmar